महाधिवेशनमा भाग लिन संसारभरबाट एनआरएनहरु काठमाडौं सहभागी हुँदै - च्यानल लण्डन
महाधिवेशनमा भाग लिन संसारभरबाट एनआरएनहरु काठमाडौं सहभागी हुँदै
काठमाडौं ( जीएनएन ) — गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाधिवेशन हुने भएपछि संसारभरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु काठमाडौं आउने भएका छन् । पहिले अनलाइन मतदान हुने भनिएकोमा प्रमुख संरक्षक शेष घलेले प्रत्यक्ष उपस्थितिमा नै निर्वाचन गर्ने गरी महाधिवेशन तोकिदिएपछि प्रतिनिधिहरु काठमाडौं आउन लागेका हुन् ।
प्रमुख संरक्षक घलेले यही मार्च २२ देखि २५ सम्म काठमाडौंमा हुने गरी संघको दशौं महाधिवेशन तोकेका छन् । महाधिवेशनका लागि उपाध्यक्ष सोनाम लामा संयोजक तथा अर्का उपाध्यक्ष मन केसी सहसंयोजक रहेको तयारी समिति गठन भएको छ। तयारी समितिमा आइसीसीका पदाधिकारी तथा सदस्य र सबै एनसीसीका अध्यक्षहरु सदस्य रहेका छन् । संघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन समिति पनि पुनर्गठन गरिएको छ ।
गत अक्टोबरमा नै हुनुपर्ने संघको दशौं महाधिवेशन विवादका कारण हुन सकेको थिएन । महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा अध्यक्ष कुमार पन्त, उपाध्यक्ष बद्रि केसी र महासचिव हेमराज शर्माले विधानविपरीत बलजफ्ती गरेपछि तीन पटक मिति घोषणा गरेपनि निर्वाचन हुन नसकेको हो ।
६ महिनासम्म प्रतीक्षा गर्दा पनि पन्त नेतृत्वको वर्तमान कामचलाउ आइसीसी कार्यसमितिले चुनाव गराउन नसकेपछि संस्था जोगाउने उद्देश्यसहित प्रमुख संरक्षक घलेले विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महाधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।
घलेले महाधिवेशन आह्वान गरेपछि संघका अधिकांश राष्ट्रिय समन्व परिषद(एनसीसी)हरु उत्साहित भएका छन् । हाल संसारका ६५ देशमा संघका एनसीसी सक्रिय छन् । ती सबै एनसीसीहरुबाट छानिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु काठमाडौं आउने भएका छन् । केही देशबाट त काठमाडौं आउन थालिसकेका छन् ।
घलेले गत शुक्रबार महाधिवेशनको आह्वान गरेपछि सबैभन्दा बढी पन्जीकृत सदस्य भएका एनसीसीहरुले घलेको निर्णयको स्वागत गर्दै महाधिवेशन सफल पार्न सबैमा आग्रह गरेका छन् । बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, मलेसिया लगायतका देशमा रहेका एनसीसीका अध्यक्षहरुले घलेको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् ।
एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘गत अक्टोबर २०२१ मै हुनुपर्ने संघको दशौं महाधिवेशन हुन नसकेका कारण उत्पन्न संकट समाधान गरी संघमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्न डा. घलेले आह्वान गर्नु भएको महाधिवेशन सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।‘ उनले संसारभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई महाधिवेशनमा सक्रिय सहभागिताका लागि आग्रह पनि गरेका छन् ।
न्याय पाएको भन्दै उत्साहित
कुमार पन्त नेतृत्वको काम चलाउ आइसीसीका केही पदाधिकारीले विधानविपरीत महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेपछि संघमा विवाद झाँगिएको हो । उनीहरुले महाधिवेशनका लागि ३ हजार ६ सय ३४ प्रतिनिधिको सूची तयार पारेका थिए । एनसीसीहरुको निर्वाचनपूर्व नै अघिल्लो कार्य समितिबाट नै ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन गर्न लगाएपछि विवाद सुरु भएको हो ।
नवनिर्वाचित कार्य समितिहरुले भने विधानअनुसार नयाँ कार्यसमितिले मात्रै प्रतिनिधि चयन गर्न पाउनुपर्ने माग राखे पनि नेतृत्वले सुनेन । आफूहरुले पठाएको सूची सदर नभए महाधिवेशनमा सहभागी पनि नहुने सदस्यता शूल्क पनि केन्द्रलाई नबुझाउने उनीहरुको अडान थियो । विधानको पालना भए मात्रै आफूहरुले न्याय पाउने र न्याय पाएपछि मात्रै महाधिवेशनमा सहभागी हुने उनीहरुको सर्त नै थियो । त्यसैले अमेरिका, बेलायत, क्यानडा र अस्ट्रेलियाले पटक पटक आफ्नो माग दोहोर्याई रहे । अन्तिमसम्म पनि पन्त नेतृत्वको कार्य समितिले उनीहरुको माग सुनुवा नगरी एकतर्फी र एकपक्षीय रुपमा निर्वाचन गराउने तयारी गरेपछि संस्था नै विभाजनको संघारमा पुगेको थियो ।
अहिले त हामीले न्याय पाएको अनुभूति गरेका छौं, एनसीसीका एक अध्यक्षले भने, विधानको पालना हुनुपर्ने हाम्रो माग सम्बोधन भएको छ ।
« एकै मञ्चबाट एकै पटक पाँच स्रष्टाका सातकृति लोकार्पण » अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक डा. सूर्यप्रसाद सुवेदीको आत्मवृत्तान्त लन्डन र न्यूयोर्कबाट एकैसाथ प्रकाशित